ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा आउन सफल 'कृ'को 'यति यति पानि' ! (भिडियो)
ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा आउन सफल ‘कृ’को ‘यति यति पानि’ ! (भिडियो)
बिहिबार, २० पुष, २०७४ 0प्रतिक्रिया
पुस २०, विराटनगर
युवा स्टार अनमोल केसी अभिनित बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’को ‘यतियति पानि’ बोलको गीत हाल युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा आउन सफल भएको छ । यो गीतले चलचित्र ‘सत्रुगते’को ‘रुपै मोहनी’ र ‘कार्टुन्ज क्रु’को ‘कम्मरको टाटु’ बोलको गीतलाई पछि पार्दै ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा उक्लिन सफल भएको हो । डिसेम्बर ३१ अर्थात् चार दिन अघि युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको यो गीतलाई हालसम्म २० लाख बढी पटक हेरिसकिएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक चलचित्र ‘कृ’को ट्रेलरले पनि युट्युबमा तहल्का मच्चाएको थियो । पहिलो पटक फरक लुक्स र एक्सन अवतारमा प्रस्तुत भएका अनमोल केसीसँग नव नायिकाको रुपमा अदीती बुढाथोकीले ‘कृ’बाटै नेपालि रजतपटमा डेब्यु गर्दैछिन् । आउँदो माघ २६ गते प्रदर्शनमा आउने ‘कृ’लाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् भने भुवन केसी र सुवास गिरीले निर्माण गरेका हुन् ।